Aostralia sy Oseania - Potatoes News
Tsotra mba hanonerana ireo mpamboly ovy Tasmanianina aorian'ny taona 'miovaova'
Potato Corner handefa andian-tsarimihetsika nomerika hanakanana ny fifandraisan'ny mpanjifa
Fitantanana ny TPP & CLso amin'ny ovy efa ho vita
'Vokatra ovy tsara indrindra eto an-tany' - matahotra ny hanana tany ny tantsaha
Nandritra ny taranaka maro lasa, ny tantsaha any andrefan'i Victoria dia namboly ny vokatra sasany nahavokatra indrindra tany Aostralia.
Miakatra hatramin'ny 29% ny vidin'ny legioma raha tsy ampy ny mpiasa
ny fianana voankazo sy voankazo dia mety hianjera roa sy 17%, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny mpiasa any amin'ny toeram-piompiana
Ny fiheverana ny sehatra dia fiovana miovaova
Tsy olana ho an'ny sehatra voalohany ihany izany
AsiaOne: 'Nanandrana ny fries Mala McShaker vaovao an'ny McDonald izahay ary tsara ny fiankinan-doha'
Toa nitohy ny fifankatiavan'i Singapore tamin'ny mala. Ny fivarotana Mala xiang guo dia hita amin'ny ankamaroan'ny lehibe ...
Islandy Nouvelle-Zélande sy puce tongolo maintso: tantaram-pitiavana ho an'ny taona
Manomboka amin'ny tendron'ny Farewell Spit ka hatrany amin'ny faran'ny ampondra Stewart Island, misy sakafo matsiro izay mampitambatra ...
FIANARANA 35 ANY
Agronico dia orinasam-pianakaviana mirehareha, miorina ao amin'ny tanàna kely any Tasmania, Spreyton. Niforona tamin'ny taona 1985 i Agronico ...
Mandratra ny 'fanariana' ovy eropeana
Ny fidiran'ny fries ovy eropeana ho any Nouvelle Zélande dia efa nisy fiantraikany tamin'ny mpamboly an-trano, miaraka amin'ny vokatra kely kasaina hatao ...
Ovy amin'ny vanim-potoanan'ny tsena miova: Annat Farms
Teny nataon'i Heather Woods, avy amin'ny nomerika tamin'ny Novambra Grower tamin'ny 1918, mbola tanora i Quentin Wright nanoratra tao amin'ny ...
Lois Ransom, mpandinika ny zavamaniry, dia nanolotra ny famerenany ny fanafarana ovy SA
Oktobra 29, 2020
Ny fankatoavana hanomezana orinasa iray aostraliana atsimo fahazoan-dàlana hanafatra ovy any Tasmania dia hijanona tsy miova aorian'ny fandinihana tsy miankina. Teo aloha ...
Nosokafan'i McCain toerana famonoana ovy Massy-Greene Drive
Efitrano fitehirizana afaka mitahiry ovy 11,000 taonina no nosokafana tao South Burnie. Ny fotodrafitrasa, izay mahazaka ...
Baker Perkins ao amin'ny Snackex - manampy ireo mpanamboatra tsakitsaky hanamboatra vokatra vaovao
Miady ny mpamboly mba hamerenana ny 'Ovy Vaovao Britanika'